Ry Malagasy, arovy ny taninao
Mampitolagaga ity resaka tany ity. Efa fanta-poko fanta-pirenena ny afitsok’ireo mpanam-bola vahiny mibodo tany eto amintsika. Ekena fa amin’ny lafiny iray dia mitondra fampandrosoana ny asa ataon’izy irney raha toa ka miantraika mivantana any amin’ny vahoaka ny vokatra. Saingy tsapa fa tombon-tsoa manokana sy fampitmboana ny harena sy fananana ny tanjona voalohany.
Vao tsy ela akory izay, nisy tovovavy teratany vahiny nitantara fa nividy tany eto Madagasikara ny dadatoany mipetraka any Australie. “Nampahafantatra ahy ity farany fa mora ny fiainana aty Madagasikara ary raha toa ka avadika vola ariary ny vola vahiny entiny dia tena betsaka dia betsaka. Akaikina renirano hono no misy izany tany izany saingy tsy fantatro hoe aiza ho aiza satria tsy nisy pitsony haiku loatra”, hoy izy nanambara.
Ataon’ny vahiny fialana sasatra sy tetika hanogoronan-karena izany ny resa-tany. Raha idirana manokana ny an’ny karana zay monina sy miasa eto dia fanomanana ny ho aviny sy ny hiafarany rahatrizay izany ity Nosy ity. Inona moa no manakana azy ireo tsy hody any an-tanindrazany? Sa ve noho ilay hoe resa-tsaranga ka aty amintsika no tany malemy anorenam-pangady satria tsy hahazo avara-patana any amin’izay misy azy any? Inoana marimarina fa ireo sokajy voahilika ny ankamaroan’ireo karana miseho ho mpanam-bola eto Madagasikara ireo. Hainy ny mivarotra, hainy ny manaivaiva ny olona ampiasainy, hainy ny mangalatra, hainy ny manao kolikoly ary vitany ny mamadika ity tanidrazantsika ity ho tanindrazany raha mitavozavoza isika. Iroe no foko faha-19 eto amin’izao.
Mahay mifanampy ry zareo. Mody tonga mialoha ny mpanam-bola ary manafatra ny Havana aman-tsakaiza k aizany no mahabetsaka azy ireo ary mampiray hina azy ihany koa.Na dia lazaina aza fa mahantra aza isika ry Malagasy havako sy mpiray tanindrazana dia ataovy an-tsaina fa antsika i Madagasikara ary na iza na iza vahiny tonga eto ka nividy na miseho ho tompony na nahazo sy nizaka zom-pirenena malagasy, ampahafantaro azy fa ny Malagasy ray sy Malagasy reny irery ihany no antsoina hoe MALAGASY ary manan-jo hisitraka ny fananany ny tompon-tany izay tsy mpindrana sy tsy vahiny. Tsy manna-tany va ianao? Dradradradrao any amin’ny mpanao lalàna ao Tsimbazaza ny zo ary andeha hangataka amin’ny fanjakana sy ny mpitondra mba samy hanana 500m2 isam-pianakaviana hambolena na hananganana fialofana fa tsy amidy. Tsy efa manampy ny fianakaviana hiarin-doha sy hanatsara ny fari-piainany ve izany?